Scup: Fanaraha-maso ny media sosialy, famakafakana ary firotsahana | Martech Zone
Scup scoop tononina - natomboka tany Brezila ary ankehitriny manohana ny Anglisy, Portiogey ary Espaniola. Ho an'ny orinasa sy ny maso ivoho, Scup dia manana ny mampiavaka azy rehetra amin'ny sehatra fanaraha-maso, famoahana ary famakafakana media sosialy tena izy.
Scup dia fitaovana fanaraha-maso media sosialy lehibe ary ampiasain'ny matihanina mihoatra ny 22. Manampy ireo mpitantana media sosialy i Scup amin'ny alàlan'ny sangan'izy ireo manomboka amin'ny fandefasana ka hatramin'ny famakafakana, mampitombo be ny fahaizan'izy ireo.
Ny toetran'i Scup sy ny tombontsoany
Araho maso ny media sosialy - Miasa 24 ora isan'andro i Scup, 7 andro isan-kerinandro, manara-maso automatique ny tambajotra sosialy ka tsy mila izany ianao. Manorata teny lakile ary fantaro izay voalaza momba ny marikao sy ny mpifaninana aminao ao amin'ny Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Vimeo, Flickr, Orkut, Instagram, Tumblr, Sl Slideshoware, Foursquare, Google, Google+, Yahoo !, bilaogy, vaovao, RSS feeds, tranonkala ary media sosialy maro hafa. Sivano ireo entana nangonina ho tsara, ratsy ary tsy miandany araka ny tombana nataonao. Manampia tag mba hanasokajiana ireo entanao.
Fantaro - Fantaro izay miresaka momba ny marikao. Azo atao ny mamantatra ireo olona manana influencial sy ireo izay miresaka betsaka momba ny marikao, minitra vitsy monja aorian'ny namoronanao ny fikarohana nataonao. Miteraha resadresaka tambajotra eo noho eo eo amin'ny sehatra. Mampisoratra ny resaka sy ny fifampiresahana i Scup, amin'izay ianao afaka mifantoka fotsiny amin'ireo olana fa tsy mila miahiahy momba ny fanarahana an'izay iza.
Avoahy - Alefaso amin'ny tambajotran-tseraseranao mampiasa Scup. Soraty daholo ny mombamomba anao Twitter, Facebook sy Youtube ary mandefasa tweets, lahatsoratra amin'ny rindrina ary horonan-tsary fa tsy miala amin'i Scup. Ny fitantanan'i Scup dia misy ambaratonga mifototra amin'ny alàlana. Ny centralisation dia tsy mamela afa-tsy ny administratera mpanara-maso hitantana profil, fa manome ny mpiasa hafa ny fahaizana mandefa sy mamaly. Midika izany fa ny fanontaniana hoe "kaonty kaonty sosialy?" ho lasa fahatsiarovana manjavozavo fotsiny.
tatitra - Miteraha tatitra ary diniho ny valiny. Araho ny fandrosoan'ny fanaraha-maso ataonao amin'ny alàlan'ny tatitra an-tsary voasivan'ny ora, andro, herinandro, volana na taona. Mifantoha amin'ny fampahalalana ilaina hanombanana ny paikadinao amin'ny tambajotra sosialy. Ary raha te-handoto ny tananao ianao ary hiasa miaraka amin'ny angon-drakitra, tsy olana izany. Scup dia manondrana ny entana rehetra avy amin'ny fanaraha-maso anao mankany Excel.
Ny Pricing for Scup dia mifaninana amin'ireo sehatra media sosialy malaza indrindra amin'ny indostria; raha ny marina dia mety hitahiry vola an-jatony vitsivitsy isam-bolana ianao raha ampitahaina amin'ny vahaolana misy anao ankehitriny.
Tags: fanaraha-maso ny fotoana tena izyscuphaino aman-jery sosialyfanairana amin'ny media sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialyfamoahana media sosialytatitra momba ny media sosialy
Fotoana laniana amin'ny valin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny varotra ambony kokoa